Bụ oke mmiri ozuzo na otu esi esi amalite | Netwọk Mgbasa Ozi
Kedu ihe bụ oké ifufe na otu o si adị
M hụrụ oké ifufe n'anya. Mgbe igwe kpuchiri igwe ojii na Cumulonimbus, enweghị m ike ịre ma obi dị m ụtọ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke ndị hụrụ Sun n'anya na-enwe mmetụta mgbe ha na-ebu Sun, ọ na-ebili maka oge mbụ n'ọtụtụ ụbọchị.
Ọ bụrụ na ọ masịrị gị, ị ga-enwe mmasị ịgụ ihe niile m ga-agwa gị ọzọ. Chọpụta ihe oke ifufe a bụ, otu o si akpụ ya na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
1 Gịnị bụ oké ifufe ahụ?
2 Olee otu esi hiwe ya?
3 Ofdị oké ifufe
3.2 Nke aja ma obu aja
3.3 Nke snow ma-obu ákú-miri-igwe
3.4 Nke ihe na ihe dị ndụ
3.5 Mmiri mmiri
Gịnị bụ oké ifufe ahụ?
A oké mmiri ozuzo bụ ihe omume nke onu ogugu nke abuo ma obu karie nke di na onodu di iche. Ọdịiche a na-ekpo ọkụ na-eme ka ikuku ghara ịdị jụụ, na-eme ka mmiri ozuzo, ifufe, àmụmà, égbè eluigwe, àmụmà na mgbe ụfọdụ na-akụ mmiri igwe.
Ọ bụ ezie na ndị ọkà mmụta sayensị na-akọwa oké ifufe dị ka ígwé ojii nke nwere ike ịmepụta égbè eluigwe a na-anụ, E nwere ihe ndị ọzọ dị iche iche akpọrọ dị ka ndị a, nke bụ ndị ahụ dị n’elu ụwa metụtara mmiri ozuzo, akpụrụ mmiri, akụ́ mmiri igwe, ọkụ eletrik, snow, ma ọ bụ ifufe siri ike. nke nwere ike ibufe irighiri ihe na nkwusioru, ihe ma obu obuna ndi di ndu.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka njirimara ya, n’enweghị mgbagha ọ bụla anyị ga-ekwu maka igwe na-emepe emepe na-emepụta. Ndị a ha nwere ike iru nnukwu ogologo: site na 9 ruo 17km. Nke ahụ bụ ebe tropopause dị, nke bụ mpaghara mgbanwe dị n'etiti troposphere na stratosphere.
Okirikiri nke ọrụ nke oke ifufe na-enwekarị mmalite nke mmalite, usoro nke ntozu okè na akụkụ ikpeazụ nke ire ere nke na-ewe ihe dịka otu awa ma ọ bụ abụọ. Mana n'ozuzu enwere ọtụtụ mkpụrụ ndụ ikuku na - eme n'otu oge, ya mere onu nwere ike ịdịgide ruo ụbọchị.
Mgbe ụfọdụ oké ifufe nwere ike ịmalite ịmalite ọchịchị, nke bu oke mmiri ozuzo na-agbanwe agbanwe. O nwere ikike nke usoro nrịgo na ịrị elu na oke mmiri na oke mmiri. Ọ bụ ụdị nke zuru oke oké ifufe 😉. Site n'inwe ọtụtụ ikuku, ya bụ, ifufe na-agbagharị n'etiti etiti, ọ nwere ike ịmepụta mmiri iyi na ebili mmiri.
Olee otu esi hiwe ya?
N’ihi ya, oké ifufe nwere ike ịmalite ọ dị mkpa ka usoro dị ala dị nso na nke dị elu. Nke mbụ ga-enwe obere okpomọkụ, ebe nke ọzọ ga-ekpo ọkụ. Ihe omuma a di iche na ihe ndi ozo nke ikuku ikuku na-amalite mmepe nke mgbago na ịrịda na-emepụta mmetụta anyị nwere ike ịmasị nke ukwuu ma ọ bụ, n'ụzọ megidere, enweghị mmasị dị ka oké mmiri ozuzo ma ọ bụ ifufe, na-echefughị ​​ọgba aghara eletrik. Nhapụ a na-apụta mgbe nbibi volta nke ikuku ruru, n'oge a na-agba ọkụ. Site na ya, ọ bụrụ na ọnọdụ ndị ahụ dị mma, àmụmà na egbe eluigwe nwere ike isi.
Ofdị oké ifufe
Ọ bụ ezie na e guzobere ha niile ma ọ bụ obere na otu ụzọ, dabere na njirimara ha anyị nwere ike ịmata ọdịiche dị iche iche. Ihe kachasị mkpa bụ:
Ọ bụ ihe ịtụnanya na nke e ji àmụmà na égbè eluigwe mee, nke bu olu ndi emere site na mbu. Ha sitere na igwe ojii Cumulonimbus, ma na-esoro ifufe siri ike, na mgbe ụfọdụkwa oke mmiri ozuzo, snow, ma ọ bụ akụ mmiri igwe.
Nke aja ma obu aja
Ọ bụ ihe ịtụnanya nke na-eme na mpaghara ala kpọrọ nkụ na mpaghara mmiri na-erughị ala nke ụwa. Ifufe ahụ na-ewepu ọtụtụ ihe na-agba ọsọ karịa 40km / h, inwe ike ịrụcha na kọntinent ndị dị anya.
Nke snow ma-obu ákú-miri-igwe
Oké ifufe nke mmiri na-ada n'ụdị snow ma ọ bụ akụ mmiri igwe. Dabere n’otú o si sie ike, anyị nwere ike ikwu banyere oke mmiri ozuzo na-adịghị ike ma ọ bụ nke siri ike. Mgbe esoro ifufe na akụ mmiri igwe, a na-akpọ ya snowfall.
Ọ bụ ihe a na - ahụkarị n’oge oyi na mpaghara ndị dị elu, ebe ọ bụ na ntu oyi na - adịkarị na mpaghara ndị a.
Nke ihe na ihe dị ndụ
Ọ na - eme mgbe ifufe na - ebu azụ ma ọ bụ ihe, dịka ọmụmaatụ, ha na - adaba na - ada n’ala. Ọ bụ oke ifufe kachasị njọ, ma eleghị anya ọ bụ otu n'ime opekempe anyị ga-achọ ịhụ.
Ha bụ igwe ojii nke na-agba ọsọ ngwa ngwa ma gbadata n'elu ala, oke osimiri ma ọ bụ ọdọ mmiri. E nwere ụdị abụọ: tornadic, nke bụ oke mmiri ozuzo nke etolitere na mmiri ma ọ bụ ala nke mechara banye na mmiri, ma ọ bụ ndị na-abụghị tonadic. Existencedị adị nke mbụ na-adabere na mesocyclone, nke bụ ikuku ikuku nke nwere dayameta nke 2 ruo 10 kilomita nke sitere na oke ikuku mmiri na nke nwere ike ibute mbibi dị egwu na oke ikuku nke 510 km / h; n'ihe banyere nke ikpeazụ, ha na-etolite n'okpuru isi nke nnukwu igwe ojii cumulus ma ọ bụghị dị ka ndị na-eme ihe ike (oke ikuku ikuku ha bụ 116km / h).
Ha bụ oke ikuku nke na-agbagharị ọsọ ọsọ na njedebe nke njedebe ya dị na njikọ nke elu ụwa na njedebe nke elu ya na igwe ojii cumulonimbus. Dabere na ọsọ ntụgharị na mmebi ọ na-akpata, oke ikuku ikuku ya nwere ike ịbụ 60-117Km (F0) ma ọ bụ ruo 512 / 612km / h (F6).
You maara ụdị ebili mmiri na etu ha siri hibe?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Kedu ihe bụ oké ifufe na otu o si adị
Spain ka na-agbanwe agbanwe ihu igwe
Achara lemur na-enwe agụụ site na mgbanwe ihu igwe